Kaaliyaha Dukaamaysiga Fudud: Horumarka Weyn ee Xiga ee ECommerce? | Martech Zone
Waa 2019 oo waxaad ku dhex socotaa dukaanka tafaariiqda leben-iyo-hoobiye ah. Maya, kani maahan kaftan, intaasna ma ahan feedhka. ECommerce waxay sii waddaa inay qaniinyo ka sii weyn ka bixiso tafaariiqda tafaariiqda, laakiin weli waxaa jira dhacdooyin aan la garanaynin markay tahay xagga hal-abuurnimada iyo ku habboonaanta leben iyo madaafiic. Mid ka mid ah soohdimaha ugu dambeeya waa joogitaanka kaaliyaha dukaanka ee saaxiibtinimada leh, caawimaadna leh.
"Sideen kuu caawin karaa?" waa wax aan u baranay inaan maqalno marka aan dhex galno dukaan, waana u qaadanay si fudud. Shabakad kasta oo eCommerce ah oo si indha sarcaad leh loo jiifiyay oo ay ku jiraan astaamaha UI-saaxiibtinimo sida AI auto-dhammaystirka ama natiijooyinka raadinta rootiga, waxaa jira inbadan oo intaas ka badan oo ah, in si cad loo sheego, gebi ahaanba nuuga. Waxay noqon doontaa ilaahnimo in la helo kaaliye dukaan saaxiibtinimo oo soo baxa oo weydii su'aalo yar oo fudud oo ku saabsan waxa aan raadinayo. Miyaa lagu samayn karaa khadka tooska ah? Maqaalkani wuxuu eegi doonaa fursadaha la heli karo oo lala wadaagi karo qaar ka mid ah qalabka, talooyinka, iyo talooyinka.
Sida laysugu geeyo kaaliyahaaga gaarka ah
In kasta oo kaaliyayaasha dukaamaysiga dalwaddu ay ku jiraan horumarka, barnaamij dareemi doona bini-aadamnimada macaamiishaada ayaan ahayn mid gaadhaya - ama miisaaniyad. Si kastaba ha noqotee, ma aha wax aad u adag in la isku daro dhowr codsiyo kala duwan si aad u siiso martidaada dhadhanka astaamaha ugu wanaagsan ee kaaliyaha dukaameysiga iyadoon wax badan la furin.
Barta Facebook Messenger, Sephora way wada sameyn kartaa.
Chatbots maahan wax cusub, laakiin UX-kooda ayaa soo hagaagay barnaamijyadooda way kala duwanaadeen. Maalmahan way fududahay in la helo hal-abuur leh isku-darka shebekadaha howlahaaga.
Farriimaha Facebook: Waad ogtahay in macaamiishaadu ay dhex mushaaxayaan bartooda Facebook maalintii badhkeed; maxaa uga dhigaya inay ka baxaan arjiga markay wax kaa doonayaan? Haysashada nidaam amar si fudud loo heli karo waa nooc ka mid ah yeelashada kaaliye shakhsiyeed oo wicitaan ah - iyo halkii aad ka raadin lahayd degelkaaga, fariimahaaga lagugu soo diro Facebook waxay ka dhigeysaa inay dareento dareen badan inay la hadlayaan bani'aadam. Sephora runti waxay hogaamineysay mas'uuliyadda mustaqbalka adduunka quruxda badan, iyadoo labo astaamood oo kala duwan oo loo yaqaan 'chatbot' ah oo ka dhex jira Facebook Messenger la adeegsanayo Assi.st: Macaamiisha ayaa u diri kara farriin si ay ballan ula qabsadaan la-taliyaha quruxda, ama waxay ka heli karaan talo ku saabsan iibsashada go'aannada.
Dalbashada cuntada qaadista ama keenista ayaa sidoo kale laga qaaday adduunka Facebook Messenger. Starbucks waa dhowr fariimood oo ka fog in la helo si ay uga soo qaataan dukaanka xaafaddaada, Dominos ayaa kuu sheegi kara heshiiska pizza-da maalinlaha ah, Pizza Hut-na waxay kuu oggolaaneysaa inaad dhammaystirto dhammaan waayo-aragnimada dalbashada adigoon xitaa ka tegin Facebook. Kuwani dhammaantood waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo sheekooyin kala duwan oo leh khibrad la mid ah markii aad saaxiib la sheekeysanayso.
Adeegga Macaamiisha: i
Isticmaalidda sheeko-gacmeedka si ay uga caawiso macaamiishaada su'aalaha adeegga macaamiisha aasaasi ahaan waxay la mid tahay haysashada kaaliye shakhsi ahaaneed oo aan seexan. Ma awoodi doonaan inay wax ka qabtaan waxyaabaha waaweyn, laakiin qalabaynta alaabta yar waxay culeys ka qaadi kartaa garbahaaga hoose. Sida saxda ah loogu magacaabay, adeeg sida Bot Chat waxaa loo isticmaali karaa in si fudud laguugu dhiso xaaladahaaga, su'aalahaaga, iyo ficilladaada - ma ahan heer aad u sarreeya heerka Bandersnatch ee kakanaanta, laakiin waa la dhammeeyaa shaqada. Waxay leedahay qiime aad u sareeya oo soo noqosho ah, sidoo kale: Imtixaan ahaan, sheekaysiga bot ayaa awooday xalliyaan 82% isdhexgalka iyadoo aan loo baahnayn wakiil aadane.
MongoDB wuxuu leeyahay macaamiil macaamiisha ah sida tan, taas oo awood u leh inay hubiso haddii booqdehu yahay hoggaamiye u qalma adoo weydiinaya dhowr su'aalood, iyo haddii ay yihiin, ku hagaaji iibiyaha saxda ah. Sephora wuxuu ka muuqdaa muuqaal kale fagaarahan - miyaad la yaabtay inay ku jiraan ciyaarta adeegga macaamiisha ee chatbot? Bogooda internetka, kaliya ma weydiin kartid su'aalaha aasaasiga ah - xitaa waxaad ka heli kartaa talooyinka qurxinta ee AI. Macaamiisha ayaa awood u leh inay iskaan ku sawiraan sawirka qurxinta ay jecel yihiin meel kasta oo ay ka helaan talo ku saabsan waxa la helayo si loo shaashado muuqaalka.
Ka dhaadhicinta martidaada inay e-maylka kaa helaan ma aha hawl fudud - ka waran haddii chatbot ku qancin karo iyaga adiga, oo kaliya u dirto sida saxda ah waxa ay doonayaan inay arkaan? Taasi waa waxa botC TechCrunch uu sheeganayo inuu sameeyo, iyada oo aan dadaal dheeraad ah laga helin qaybta macaamiisha gabi ahaanba. Markuu akhristuhu isdiiwaangaliyo wararka shakhsiga ah adoo adeegsanaya adeegga loo yaqaan 'chatbot service', barnaamijkiisa AI wuxuu markaa dabagal ku hayaa nooca wararka ay aqriyaan wuxuuna u diraa kaliya maqaallo uu u maleynayo inay xiiseynayaan.
U ogolow StitchFix inuu isku dayo inuu ku ogaado si ka wanaagsan intaad naftaada u taqaanno
U dhisida qaabka ganacsigaaga
Ma fiicnaan laheyd haddii macaamiishaadu had iyo jeer u dareemaan sidii inay kaa helayaan gargaar shaqsiyeed Waxaa jira shirkado iyo warshado kooban oo ku guuleystey inay ku dhisaan dareenka kaaliye shakhsi ahaaneed qaabkooda ganacsi.
Qayb ka mid ah isla'egta sanduuqa rukunka ee guuleysta ayaa ogaanaya waxa macaamiishaadu jecel yihiin si loogu diro waxa saxda ah. StitchfixXarumaha moodeellada ayaa gabi ahaanba ka dhigaya inay macaamiisha u sheegaan Stitchfix waxa ay jecel yihiin, marka Stitchfix waxay u soo diri kartaa waxyaabo ay jeclaan karaan. Waa shaqsi ahaantan shakhsi ahaaneed ee dareemeysa mid aad u gaar ah, maaddaama qof walba lagu lammaaneeyo astaamo shaqsiyeed ka dib markii uu buuxiyo kedis faahfaahsan oo culus. Macaamiisha ayaa bixiya khidmad si ay isugu qoraan, taas oo laga jaro haddii ay hayaan ugu yaraan mid ka mid ah waxyaabaha loo soo diro.
Si kastaba ha noqotee, wax ganacsi ah kama faa'iideysan karo shakhsiyaadka shakhsiyaadka ah ee eegaya astaan ​​kasta oo shakhsi ahaaneed iyo kala-soocida liistada liiska waxyaabaha. Bini'aadamku aad ayey u cabsi badan yihiin si dhakhso leh oo waxtar leh u baaraandegidda tiro badan oo xog ah iyo go'aan qaadasho - taasi waa shaqo loogu talagalay sirdoonka farsamada. AI waa sida Stitchfix uu si hufan kor ugu qaado, iyada oo algorithmkeedu eegayo isbeddellada, cabbiraadaha, jawaab celinta, iyo doorbidka si loo yareeyo liiska soo-jeedinta ee stylist-ka uu ka dooranayo. AI wuxuu caawiyaa stylist-ka, kaas oo markaa ka caawiya macaamilka isku xirnaanta farsamada iyo aadanaha.
Haddii Aad Ka heshay Taas, Waad Jeceshahay…
Stylist shaqsiyeedka dhabta ahi wuu garanayaa waxaad jeceshahay iyo waxaad iibsatay, wuxuuna u adeegsadaa macluumaadkaas inuu ku tuso waxyaabaha kale ee aad jeceshahay. Ma ahan wax adag sirdoonka macmalka ah in lagu ekeysiiyo “hadaad taas jeceshahay, waad jeclaan laheyd tan” talooyinka shaqsiga ah. Dagaal badhkiis ayaa macaamiisha ka dhigaya inay is qoraan si aad u soo ururiso xogtooda, badhka kalena si wax ku ool ah ayey u isticmaalaysaa xogtaas. Kumaa shaqo weyn ka qabta tan? Waad qiyaastay. Amazon.
Amazon way ogtahay in 60% waqtigaas, qof fiirinaya sameeyaha kafee Keurig uu sidoo kale eegay K-Cups-yada la tuuri karo, iyo malaha koobabka dhabta ah ee laga cabi karo kafeega. Muxuu AI sameeyaa? Waxay u soo jeedinaysaa alaabadaas qof kasta oo eegaya Keurig. Waa nooc ka mid ah sida haysashada caawiye caaqil ah oo si joogto ah isugu dayaya inuu qiyaaso waxaad rabto iyadoo ku saleysan waxaad raadisay, waxaad riixdo, iyo waxa malaayiin iyo malaayiin dad kale ah ay ku sameeyeen xaaladdaada.
AI miyuu kaa caawin karaa inaad hesho alaabtaada ugu fiican?
Raadinta si mustaqbalka
Baarayaasha iyo horumariyeyaashu had iyo jeer waxay isku dayayaan inay ka jawaabaan su'aasha: Miyaynu ka dhigi karnaa kaaliye dukaamaysi dalxiis dalxiis oo dhab ah? Waqtigaan la joogo, waxaa jira laba codsi oo xiiso leh oo aad isugu dhow.
Mid waa Macy's On-Call, oo ahaa mid layaableh kahor waqtigiisa, sidoo kale wuxuu si khaas ah isugu daraa AI iyo kaaliyaha dukaamaysiga muuqaalka leh booqashada dukaanka leben-iyo-hoobiye. Markay macaamiishu booqdaan dukaanka Macy, waxay ku boodi karaan taleefankooda waxayna geli karaan howlaha On Call si ay u weydiiyaan su'aalo ku saabsan kaydinta, amar ay bixiyeen, ama xitaa u helaan tilmaamaha goobta waax kale. Waxa kaliya ee ay tahay inay sameeyaan ayaa ah nooca su'aalaha waxayna helayaan jawaabo deg deg ah.
Wicitaanka 'Macy' ee 'On-Call' waxaa lagu tijaabiyay 10 dukaan, laakiin wax badan kama uusan gudbin halkaas. Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqatay rajo, waxayna la wadaageen IBM Watson. Caannimada sii kordheysa ee isticmaalka aaladaha loo yaqaan 'chatbots' awgeed, waa maalgelin laga yaabo inay mustaqbalka wax ka tarto, waxayna mudan tahay in la isku dayo in lagu daydo dukaanka 'eCommerce'.
Si kastaba ha noqotee, horumarkii ugu dambeeyay uguna weynaa waa barnaamij la yiraahdo Elly. Elly waa waxa ugu dhow ee jira kaaliyaha dukaamaysiga dalwaddii runti caqli badan - hase yeeshee, weli waxay ku jirtaa heerarka horumarka. Iyadu waa AI oo ka caawisa macaamiisha inay helaan wax soo saarkooda saxda ah iyada oo la weydiinayo su'aalo taxane ah, isu dheellitirka astaamaha, qiimaha, iyo wax kasta oo kale oo macmiilku sheegayo inay dan ka leeyihiin. Waxay ku jirtaa marxaladaha imtixaanka xilligan, laakiin hadda waad codsan kartaa caawimaaddeeda helitaanka taleefankaaga casriga ah ee saxda ah haddii aad rabto dhadhanka mustaqbalka.
Caawiye shakhsi ahaaneed wuu ogyahay ganacsigooda gudaha iyo dibaddaba. Waxay sidoo kale ujeedadoodu tahay inay ogaadaan macluumaadka ugu habboon ee la xiriira macaamiishooda intii suurtagal ah, si looga caawiyo inay go'aanno caqli-gal ah u gaaraan oo ay uga baxaan qanacsanaanta (iyo, dabcan, in ka badan oo ay ku soo noqdaan) Ugu dambeyntiina, waxay rabaan inay tani ku dhacdo si dabiici ah oo hufan.
Dhibaatada haysata adeegsiga kaaliyeyaasha shaqsiyadeed ee bini'aadamka ayaa ah inaysan si hufan kor ugu qaadi karin una isticmaali karin xog fara badan qaab macno leh. Mustaqbalka kaaliyeyaasha dukaamaysiga dalxiisku waa in la isku daro kaalmaynta iyo shakhsi ahaanshaha kaaliyaha aadanaha iyo awoodda xoqidda xogta iyo xawaaraha caqliga macmalka ah. Codsi keliya ma wada qaban karo (weli), laakiin isku-darka xoogaa qalab ah oo la heli karo ayaa hadda laga yaabaa inuu furo heerar cusub oo wax-ku-ool ah oo loogu talagalay ganacsiyada eCommerce.
Tags: chatbotDomino'scaaqilfacebook facebookh & mMongoDBshaqsi ahaantiisasephora
Dulmarka Guud ee bogga Alexa.com: Noocyada cusub waxay siinayaan Suuqgeeyayaasha Sawir ka Fiican Raadinta iyo Fursadaha Mawduucyada, bilaash